AbeTop 10 bahlangane nabaphathi boKhozi FM
OMUNYE woDJ uSithelo okuvela ukuthi naye ubeyingxenye yomhlangano obubizwe wuKhozi FM Isithombe: INSTAGRAM / SITHELO
NQOBILE MASIMULA | January 6, 2020
UKHOZI FM lubize umhlangano ophuthumayo obuyimfihlo nabaculi abebebanga isicoco sengoma ebizohlukanisa unyaka. Kuthiwa luxoxe nabo, lwase lubasayinisa isifungo sokuthi bangayixoxeli muntu into ebidingidwa ngoba wudaba olubucayi ngokwedlulele.
Isolezwe ngeSonto lithole ngomthombo walo ozazi zonke ezalo msakazo, ukuthi izikhulu zoKhozi zihlangane nabaculi eThekwini ngoLwesihlanu emini emahhovisi eSABC eThekwini.
Kuthiwa ngesikhathi befika abaculi, banikwe umqingo wamaphepha obubaphoqa ukuthi bazibophezele ekutheni ngeke bathi vu ngokuzokhulunywa, ngale kwalokho bangangeni emhlanganweni.
"Kunomculi oshaye phansi ngonyawo, wathi ngeke asayine, waphuma wahamba washiya kanjalo. Abanye basalile basayina kwase kuxoxwa-ke. Badonswe ngendlebe ukuthi indaba bangayithi vu kusho," umthombo.
Yize kungavelanga ukuthi umongo wengxoxo ubumayelana nani kodwa kuyavela ukuthi bekuhlahlwa indlela eya phambili ngokuthi njengoba ibhuntshile indaba yengoma ebizohlukanisa unyaka, kuzokwenzekani bechazelwa nangemininingwane yecala elifakwe wu-Owen Ndlovu.
Abaculi babizwa nje, kwaba nembedumehlwana yokuhlehliswa kokumenyezelwa kwengoma ehlukanisa unyaka, abalaleli basala bekhexile. Indaba yonakala ngokuthi uNdlovu afake isivimbelo senkantolo ngoba ekhala ngokuthi iSABC igaya imali ngamandla akhe, yena akathintwa. UNdlovu umile ekutheni wuyena owaqhamuka neqhinga lokuthi ingoma yonyaka ivotelwe ngabalaleli kunokuthi iqokwe ngabantu abathile.Udaba kulindeleke ukuthi lulalelwe ngoFebhuwari nonyaka.
Umthombo uthi yilona daba abebebizelwe lona abaculi, bezotshelwa ukuthi kuqhubekani. Kuthiwa phakathi kwabaculi ababonakale emhlanganweni kubalwa uNtencane, uDJ Tira noDJ Sthelo ababanga isicoco.
Okhulumela iSABC, uMmoni Seapelo, uthe kabakwazi ukukhuluma kakhulu ngendaba yomhlangano ngoba udaba lusezithebeni zenkantolo.
"Ngingakuqinisekisa ukuthi impela uhlalile umhlangano phakathi kwezinhlaka ezithintekayo kwaxoxwa.
Inhloso bekuwukubaqinisekisa ukuthi siyabeseka futhi sibambisene nabo kukho konke okuqhubekayo ngodaba. Sizolinda udaba luze luphothulwe enkantolo, kakukho esesizokusho manje,’’ kusho uSeapelo.
Kwenzeka lokhu abalaleli balo msakazo ezinhlelweni ezahlukene, balokhu bebuze ukuthi kuzokwenzekani ngemali yalabo abavotela ingoma yonyaka.